Madaxweyne Erdogan oo xayiray hub Niyukleyr oo Mareykanka u yaalla Turkiga - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMadaxweyne Erdogan oo xayiray hub Niyukleyr oo Mareykanka u yaalla Turkiga
Warbaahinta Mareykanka ayaa kusoo warrantay in saraakiil katirsan dowladda dalkaas ay ka digeen in 50 madax oo gantaalada Niyukleyrka ee Mareykanka u yaalla gudaha dalka Turkiga ay xayirtay dowladda dalkaas.
Xukuumadda Washington ayaa isku dayeysa sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa arrintan, xilli Turkiga uu waqooyiga dalka Suuriya ka wado duulaan uu ku baacsanayo Kurdiyiinta Suuriya.
Bixitaanka ciidammada Mareykanka ay ka baxeen waqooyiga dalka Suuriya ayaa dhalisay in ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka ay ku siqaan goobihii ay heysteen askarta Mareykanka, sidoo kalena halkaas ay isaga baxaan isbaheysigii Mareykanka uu ku lahaa gobolka – Kurdiyiinta Suuriya.
Arrintan ayaa waxaa aad u dhaliilay siyaasiyiin badan oo Mareykan ah, iyagoona xukuumadda Donald Trump ku eedeeyay inay dhabarka ka toogatay xulafadii ay ku lahaayeen gobolka.
Dowladda Mareykanka ayaa Turkiga ku boorsisay inay joojiso duulaanka ka dhanka ah Kurdiyiinta, oo haddii ay ka dhaga adeegtana ay burburin doonta dhaqaalaha Turkiga.
Warar ayaa sheegaya in markii uu mugdi soo kala dhexgalay xiriirka labada dal ay keentay in Mareykanka uu ka fikiro waxa laga yeelayo hubka Niyukleyrka ee u yaalla saldhig milateri oo ku yaalla koonfurta bari ee dalka Turkiga.
Wargeyska The New York Times ee dalka Mareykanka ayaa kusoo warramay in saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha dibadda iyo tamarta ay maalma kahor ka Shireen waxa laga yeelayo 50-ka madax ee hubka Niyukleyrka ee Mareykanka ka yaalla Turkiga iyo qaabka ay ula soo bixi karaan.
Mid kamid ah saraakiishaas ayaa wargeyska u sheegay in hubkaas uu xayiray Madaxweynaha dalka Turkiga, Rajab Teyib Erdogan, waxaana laga cabsi qabaa in hadii Mareykanka uu hubkaas meesha ka saaro ay ifafaalo u noqon karto gabagabada xiriirka labadan dal ee ka wada tirsan gaashaan buurta NATO.
Arrintan ayaa timid muddo bil ah kadib markii dowladda Turkiga ay sheegtay in aanan la aqbali karin in loo diido inay hub soo iibsato, taas oo ay sheegtay inay ka soo horjeedo heshiiskii hubka Niyukleyrka ee uu dalkaas galay sanadkii 1980.
Madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqday mid xaqiijiyay hubka Niyukleyrka ee Mareykanka ugu keydsan dalka Turkiga, taas oo ahayd sir aanan mudo la shaacinin, waxbadanna aanan laga ogeyn.
Khubara badan waxay aaminsan yihiin in Mareykanka uu dalka Turkiga ku keydsaday bambooyinka B-61.
Hubkan ayaa la sheegay in uu qeyb ka yahay istaraatijiyadda gaashaan buurta NATO, in go’aan laga gaarana waxaa la rumeesan yahay inay u baahan tahay in inta badan 28 dal ee xubnaha ka ah ay isku raacaan.
Madaxweyne Trump ayaa mar wax laga weydiiyay bal in uu ka walaacsan yahay hubkan Mareykanka kaga xayiran Turkiga ayaa waxaa uu sheegay in uusan wax walwal ah qabin.
“Aad ban isugu kalsoonahay, oo waxaan halkaas ku leenahay saldhig milateri oo ciidamada cirka ah, saldhigaas oo keliya ayaa meel badan qabsan kara, waa saldhig ciidmaada cirka oo aad u weyn,” sidaas waxaa yiri Trump oo u muuqday in uu xaqiijiyay hubka Mareykanka uu yaalla Turkiga.
Xubna katirsan Aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka ayaa ku taliyay in hubkaas laga saaro Turkiga oo la geeyo goob kale.
Mareykanka ayaa sheegay in Turkiga ay ka wada tirsan yihiin NATO, ayna adag tahay inay dagalamaan, wuxuu intaa raaciyay in marwalba ay doorbidayaan in waxa taagan xal diblomaasiyadeed lagu dhameeyo.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, Mike Pompeo iyo xoghayaha arrimaha dibadda ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inay gaaraan Turkiga, si ay wadahadal ula furan xukuumadda Ankara.
Trump: Duullaanka Turkigu ku qaaday Suuriya ma aha mid ka dhan ah Mareykanka